Inhliziyo engiphila ngayo, umklomelo wePrimavera de Novela 2020 | Izincwadi Zamanje
Inhliziyo engiphila ngayo yinoveli yomlando ebhalwe yiSpanish uJosé María Pérez, owaziwa kangcono njengePeridis. Yanyatheliswa ngo-2020 futhi isethwe eSpain eyayinezinkinga ngo-1936. Zisuka nje, le ncwadi yamukelwa kahle ngabafundi nabagxeki bemibhalo. Ngonyaka ofanayo wokukhishwa kwayo, yanikezwa umklomelo wePrimavera de Novela.
Umbhali uveza esanduleleni sencwadi ukuthi kugqugquzelwe yingxoxo abe nayo esitimeleni nomuntu angamazi, owayeyinzalo kadokotela osekhulile ovela kubantu baseParedes Rubias. Umtshele izindaba ezimbalwa ezivela ezihlotsheni zakhe, nakwabanye omakhelwane. Umugqa ngamunye walokhu kulandiswa usekelwa yinkulumo eshiwo, ngezindaba nabalingiswa bangempela bagcwaliswa nenye inganekwane.
1 Inhliziyo Engihlala Nayo (2020)
1.1 Umndeni wakwaBeato
1.2 Umndeni wakwaMiranda
2.1 Ukusebenza njengomakhi
2.2 Eminye imisebenzi yobungcweti
2.3 Umjaho wezincwadi
Inhliziyo engihlala nayo (2020)
Kuyinoveli yomlando isethwe emphakathini weParedes Rubias, khona kanye ekuqaleni kweMpi Yombango yaseSpain. Incwadi ithi kuhlelekile en izahluko ezimashumi ayisihlanu ezimfushane, okuyinto baqala en NgoJuni ka 1936 y qeda Okthoba ka 1941. Isakhiwo sihilela abalingiswa abehlukene, abadlula ebunzimeni obuhlukile, ngaphesheya kwempi.
Incwadi ikhombisa ukuthi baphila kanjani iminyaka enzima ngenkathi impi iqhubeka futhi ngemuva kwalokhu kufinyelela emvuthwandaba, kepha ngaphandle kokulahla ithemba lokuthi konke kuzothuthuka. Konke kwenzeka eSpain elimele kakhulu, kodwa nabantu abanamandla, abazolwa ukumhlenga, ngokusekelwe othandweni, emndenini kanye nasifiso sekusasa elingcono.
Inhliziyo engiphila ngayo: ...
UHonorio Beato ungumfelwa futhi uhlala namadodakazi akhe amathathu: UCaridad, u-Esperanza noFelicidad. Ungudokotela owaziwayo ophethe umtholampilo eCubillas del Monte futhi ngaphambi kwempi wasebenza njengenhloko yeFalange yaseSpain. Isikhathi esisodwa kwaqala ingxabano, bona banquma ukubaleka edolobheni ukuze kugwenywe ukujeziswa okungenzeka.
U-Esperanza ungomunye wabalingiswa abaqavile endabeni. Uyisishoshovu sezepolitiki esigabeni sabesifazane baseFalange nowesifazane onakekelayo. Ngaphezu kokuvikela imibono yakhe, usiza abangani bakhe baseRiphabhulikhi, iningi labo eligwetshwe intambo. Ngaphandle koshintsho olunikezwe impilo yakhe, uncamela ukubeka inhlalakahle yabanye ngaphambi kokucabanga eyakhe.
U-Arcadio Miranda ungudokotela futhi uyi-republican, umfelwa onamadodana amabili, uGabriel noLucas, nendodakazi egama linguJovita, osebenza njengothisha edolobheni. Umndeni wakho uzothinteka kakhulu ngenxa yezingxabano ezihlomile, besatshiswa ngisho yiziguli zabo nalabo ababaziyo. Bonke bazosuswa emisebenzini yabo ukuze bathole imiphumela yaleso siphithiphithi.
Gabriel ungudokotela osemncane onomsebenzi omuhle kakhulu kanye neKhansela loMkhandlu Wedolobha. Kuzofanele acashe ngoba ungowasohlangothi oluphikisayo, yize naye ezogcina evaliwe. Ngokwengxenye yayo, Lucas, ophakathi kweqiniso elibi lomfowabo, ubizelwe phezulu, isimo asibona njengesenye indlela yokusindisa impilo yakhe, ngoba unamalungelo omsebenzi.
Indaba ifaka imindeni emibili, ekaDkt Honorio Beato —UbuKristu NamaFalangist— kanye naleyo yeRiphabhulikhi uDkt Arcadio Miranda. Bobabili babazana kusukela ezifundweni zabo esikoleni sezokwelapha, yize babehlala benokuthambekela kwezepolitiki okuhlukile. Bona nemindeni yabo baphila izinsuku zenjabulo ngosuku olwandulela uhambo olungcwele, ebanjwa minyaka yonke yosuku lweVirgen del Carmen.
Maphakathi nalo mkhosi, bonke abantu bahlanganyela ekudleni nasemidansweni, ngaphandle kokubandlulula ukuthi bakuliphi uhlangothi lwezepolitiki. Yilapho lapho -Emva kweminyaka eminingi- U-Esperanza Beato noLucas Miranda bayahlangana, Ngithola ukuthi izoletha okungaphezu kobungane nje. Lokhu ngaphandle kokucabanga ukuthi ezinsukwini ezimbalwa kuzoqala impi embi, obekuzoshintsha yonke into.
Abaphikisi bakahulumeni basuka ekubeni ngabahlubuki baba phambili futhi baba nezwi. Lapho bethatha izintambo, baqala ukuhlukumeza amalungu kahulumeni ophumayo. La iqiniso elisha laletha isiphithiphithi esibi kwezombusazwe nakwezempi, esula yonke into esendleleni yayo.
Sonke lesi simo esiyinkimbinkimbi sabangela amanani avela kubantu; isibindi, ukuthobeka, ubumbano kanye nobuntu bachuma kakhulu; ngale kokuhlukana kwezepolitiki.
UJosé María Pérez —umakhi nombhali owaziwa njengoPeridis— weza emhlabeni ngeSonto, ngoSepthemba 28, 1941 kumasipala waseCabezón de Liébana (eCantabria). Lapho ngineminyaka emithathu ubudala, Umndeni wakhe wathuthela ePalencia, ikakhulukazi edolobheni lase-Aguilar de Campoo, indawo lapho ahlala khona waze waqeda isikole samabanga aphezulu.
Eminyakeni eminingi kamuva, wathuthela eMadrid ukuyokwenza izifundo zakhe zaseyunivesithi kwathi ngo-1969 waphothula izifundo zakhe njengomakhi wezakhiwo. Ukhethe lo msebenzi oshukunyiswa intshisekelo yakhe ekugcinweni, ekuvikelweni nasekusindisweni kwefa lobuciko laseSpain.
Kusukela ethweswe iziqu, usebenze ekwakheni kabusha amanye amathempeli, izinkundla zemidlalo yaseshashalazini, izakhiwo, izinqaba, imitapo yolwazi nezindlu zamasiko. Iminyaka engama-40 I-1977 - 2017 Uqondisile ePalencia iSanta María la Real Foundation Yamagugu Omlando, okwamvumela ukuthi abekhona ekuvuseleleni okuningana okubalulekile, okufana:
Isigodlo sikaFrancisco de los Cobos e-Úbeda
Isigodlo saseSanta María la Real e-Aguilar de Campoo
IMeya yaseColegio "uVasco de Quiroga" eComplutense University of Madrid
Eminye imisebenzi yobungcweti
I-Peridis waziwa kabanzi ngomsebenzi wakhe njengomdwebi wekhathuni ohlekisayo, umsebenzi owaqala eminyakeni engamashumi ayisikhombisa. Wenza opopayi bakhe bokuqala ngokususelwa kosopolitiki bangaleso sikhathi, ayishicilela kulo magazini USiario SP.
Kusukela ngo-1976 kuze kube manje, uPérez ishicilela imichilo yamahlaya ephephandabeni We bafowethu. Ngalo msebenzi othelayo, umbhali wenze ukuhlanganiswa okuningana, futhi ngenxa yalokho, kushicilelwe izincwadi ezi-6 ezinemifanekiso yakhe emihle, ezigqamisa: IPeridis 1.2.3. Iminyaka engu-6 kuze kube noshintsho (1977) futhi Ukwethembana futhi akukho bond (1996). Usekhiqize nezimbili amathangi ikhathuni le I-TVE.
Kusuka ku-2002 kuya ku-2007 wethule uchungechunge lwe-tv Izikhiye ze-Romanesque en I-TVE. Le dokhumentari ibinezinkathi zonyaka ezintathu lapho kwanikezwa khona uhambo lwehora nengxenye lwezikhumbuzo zomlando ezahlukahlukene. Ngemuva kwalomsebenzi, uPeridis ibuye ishayele ezinye izinhlelo ezimbili esiteshini sethelevishini esifanayo, njenge: Hambisa Izintaba y Ukukhanya nemfihlakalo yamasonto amakhulu.
Izincwadi zakhe waqala emkhakheni wezincwadi ngo-1977, yize kwakungo-2014 lapho wethula inoveli yakhe yokuqala: Ilinde inkosi. Eminyakeni emibili kamuva, wabuya no: Isiqalekiso seNdlovukazi u-Eleanor, indaba eqhubeka nendaba edlule. Kusukela lapho ubhale ezinye izincwadi ezi-3: Ngisho nokuchithwa kungaba yithemba (2017), Indlovukazi ingenabukhosi (2018) futhi Inhliziyo engihlala nayo (2020).
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Izinhlobo » I-Novela » Inhliziyo engihlala nayo
URosa Ribas. Ingxoxo nombhali Wezingane Ezinhle